Google maringe neFacebook pane Zvakavanzika
China, November 10, 2011 Chitatu, November 9, 2011 Douglas Karr
Sezvo Facebook neGoogle zvadzikira mune zvese zviito zvatinoita pawebhu, mitsara yekuvanzika nekuchengetedzeka kuri kuwedzera kudzikira uye kunotsamira pane ava vatengesi. Ini handisi kufara neGoogle kana Facebook munzvimbo idzi dzekunetseka. Nepo vese vari vaviri vachiita kunge vari kuita basa rakakura mukuchengetedza ruzivo rwedu kubva kune vanoita zvakaipa, ndinonetsekana kuti vari kuve vakaipa pachavo.
Nekudzora zvese kushambadza uye zvemukati zvemukati zvebhizinesi - uye kuroora vaviri pamwechete - vane nzwisiso isina kumboitika muhupenyu hwedu. Izvi zvinoita kuti vaviri ava vatange kutarisisa kune vanobiridzira uye mbavha dzekuzivikanwa. Iko kugona kwekuvharisa mabviro avanoita iyi data kunowanikwa kuburikidza neyakaomarara akateedzana mvumo uye marongero; zvisinei, izvo zvipingamupinyi hazvingokanganisa kushambadzira… zvinokanganisa ruzivo rwevashandisi futi. Saka… vazhinji vedu hatinetseke!
Mune echinyakare midhiya, uyu waigara uri mutsetse usati wamboyambuka. Vashambadziri havana kumbofanirwa kukanganisa nhau kana zvinopesana. Mumusango kumadokero tinozviwana tavemo, matafura atendeuka uye aya maGoriati anotonga zvese zvirimo uye kushambadza.Veracode yakapa iyi Infographic nezvekuti vaviri vacho vanofananidzwa sei kana zvasvika pakuchengetedza uye kuvanzika:
IMO, sevatengi pavanotanga kunzwisisa mashandisiro anoita dhata iyi (uye dzimwe nguva kushungurudzwa), ivo vachange vachidzosera kumashure uye nekuwedzera uye kuwanda kwemitemo, mirau uye kunyangwe kumatare edzimhosva anotanga kubuda!
Veracode Chikumbiro Chengetedzo inounza otomatiki, gore rakatarisana nenjodzi yekuona yekuona iyo inoratidzira zvikanganiso zvekuchengetedza mukodhi yekushandisa. Iko hakuna chekuisa kana kumisikidza? Zvinoreva kuti unogona kutanga kuyedza uye nekukanganisa kugadzirisa nhasi.
Wedzera peji reZinki kune yako WordPress Template
Kukosha Kwezvitsva Zvemukati zveSEO